Xeerka Astaamaynta Qoraalka W/Q Ibraahin-Hawd Yuusuf
Friday June, 22 2018 - 06:42:46
Thursday March 23, 2017 - 08:05:12 in by Super Admin
Qofku kolka uu hadlayo ma dhurmo ee hadalkiisa wuu habeeyaa oo hagaajiyaa,
kana dhigaa wax la dhegaysan karo. Sida taa loo gu ka la wanaagsan yahay baa loo ka la dhihid macaan yahay loona ka la codkarsan yahay. Joogsiyada iyo hakadyada uu qofku hadalkiisa ku ka la sooco, kicinta codadkiisa iyo dejintiisa, xigashada murti kale iyo muujinta in ay xigasho tahay… siyaalahaa iyo siyaalo ka mid ah buu qofku hadalkiisa ku qurxiyaa si uu cidda dhegaysanaysa maqalkeeda iyo maankeeda u hanto. Taas bay dadku ku ka la xariifsan yihiin. Qoristuna waa la mid oo hadalka la qorayo haddii aan xeer iyo xeelad loo raacin si wacan la isu la garan maayo, saamayntii loo baahnaana yeelan maayo. Sidaa darteed, haddii ay aftahano hadal jirto, aftahano qoraalna waa ay jirtaa.
U gu horrayn qorista waxaa loo ga baahan yahay astaamo la gu maamulo oo la gu maareeyo, haddii taa la waayana waxaa soo baxaya qoraal aan madax iyo mijo ka la lahayn. Tusaale ahaan haddii aan la astayn meesha hadal ka bilawdo ama ku dhammaado, foolxumada ka sokow waxaa lumaya garashada macnaha. Haddaba astaamaha u gu mudan ee hadalka qoran la gu agaasimaa waa kuwan soo socda (eraybixinta qaarkeedna aniga ayaa sameeyay):
Hadal wal oo la qorayo dabcan waxaa la ga bilaabaa sadar cusub. Sadarkaa eraygiisa kowaad xarafkiisa kowaad waa in uu weynaadaa. Saddex siyaalood ayuuna sadarka cusubi u bilawdaa. Mar waa bilwga qoraalka, mar kale waa cutub qaraalka ka mid ah, mar saddexaadna waa faqrad cusub. Labadaa jeer ee hore dunida waa la gu ka la duwan yahay oo dad baa sadarka hore saddex tallaabo gudaha qoraalka u geliya, dad kalena ma geliyaan. Marka saddexaad se waa la ga siman yahay in faqradda hadalkii hore ku xidhan saddex tallaabo gudaha la geliyo. Qoraallada qaar faqradaha mid walba ta ka korraysa hal tallaabo ayaa faqraddii kore hoos loo ga durkaa. Danta arrimahaas oo dhan la ga lee yahayna waa in la muujiyo meesha jumlad ama faqrad cusubi ka bilaabanayso, si hadalku u ka la soocnaado.
2. Weyneynta xarafka kowaad magac wal oo gaar ah
Shardigaa badanaa waa la is la yaqaan, oo tusaale ahaan waa la wada qoraa: Axmed, Hargeysa, Afrika iwm. Laakiin gef weyn oo la aad loo galaa waa weynaynta magacyada guud, tusaale: qof, madaxweyne, dad, magaalo, dal, qaarad duni, geed, bahal, libaax iwm. Magacyadan dambe gaar ma aha ee magac-tilmaameed guud, sidaa darteed xarafkooda kowaad la ma weyneeyo.
Hakadka waxaa la gu gaagaabiyaa jumladda dheer si loo muujiyo meel akhriska loo gu neefsan karo, waayo kolka la hadlayaba la ma duddubiyo ee waa la yara hak’hakiyaa. Faallo yar ama qeexid gaaban oo aad jumladda dhex gashanayso qudheeda laba hakad waa la gu xidhaa. Astaantan iyo tan ku soo xigta ee joogsi labadaba dadka aan qorista caadaysani dhibaato ayay ku qabaan. Wax aad arkaysaa jumlad aad u dheer oo ka kooban jumlad-hoosaadyo badan haddana aan hakad qudha lahayn. Taa beddelkeedana wax aad arkaysaa hakadyo ama joogsiyo aan loo baahnayn oo qoraalkii iska dhex yaalyaalla. Hadal aan macno buuxa lahayn in hakad ama joogsi la geliyaa iyaduna waa xaaraan.
4. Joogsi .
Waa marka jumaladdu dhammaato iyada oo macne buuxa bixisay, isla markaa ka soocmi karta jumladda ku soo xigta.
5. Joogsi dhiman ;
Waxaa la gu asteeyaa meel jumladdu macne buuxa ku yeelatay laakiin aanay joogsi buuxa gaadhin; ama haddii jumladda inteeda hadhay aanay macne ahaan iskeed isu taagi karin.
6. Astaan wayddiineed ?
Waa calaamad la gu garto hadalku in uu yahay su’aal xitaa haddii aan warcelin loo ga baahnayn.
7. Astaan dhawaaq !
Waxaa la gu qoraa hadalka ah yeedh ama qaylo, amaba leh lamafilaannimada sida naxdinta iyo farxadda weyn, amaba leh yaab iyo qaadanwaa. Bariidadq ayaa iyadana la raaciyaa. Guud ahaan ujeedka astaantani waa muujinta dareen xooggan.
8. Astaan qaylo ASTAAN QAYLO
Erayga ama weedha oo la gu qoro xarfo wada waaweyni wax ay macnaysaa hadalkaasi in uu yahay qaylo dheer. Waxaa kale oo loo adeegsadaa muujinta eray la doonayo in carrabka aad loo gu adkeeyo ama hadalka intiisa kale la ga soo dhex dhufto. Ciwaannadana waa la ga dhigi karaa xarfo wada waaweyn.
9. Moos :
Labada dhibcood ee isdul saaraan waxaa la gu ka la soocaa faallada hadalka iyo odhaah qof toos u dhihi doono. Waxaa kale oo loo adeegsadaa hadal la soo yidhi iyo waxa hadalkaa loo la jeedo. Waxaa kale oo la gu qabtaa ciwaan hoosaadka qoraalka.
10. Qulqul …
Saddexda dhibcood ee isdaba taxani wax ay muujiyaan hadal isaga oo socda wax kale soo dhex galeen ama ka la go’ay, amaba isaga oo aan dhammaan sabab uun loo joojiyay.
11. Jiitin –
Waxaa la gu muujiyaa hadalku kolka uu darandoorri ama haasaawe yahay halka qof walba intiisu ka bilaabanayso. Waxaa kale oo loo adeegsadaa bilawga jumlad sii qeexaysa mid iyada ka horraysa.
12. Xero ” ”
Waxaa la gu dhex qoraa eray ama jumlad cid toos loo ga soo xiganayo, ama wax hadalka socda si uun u ga gooni ah. Waxaa kale oo la gu xereeyaa eray ama weedh aan la hubin in ay sidaa ahayd ama ujeeddo aan teedii ahayn loo dhahayo.
13. Edeg ( )
Labada qaanso ee is ka horjeeda waxaa la gu dhex qoraa eray ama weedh mid ka horreysay qeexaysa ama fasiraysa.
14. Ardaa [ ]
Waa astaan la gu garto waxa ku dhex qorani in ay hadalka socda marti ku yihiin ee aanay ka mid ahayn.
15. Qoqob /
Waa astaan la gu ka la dadbo laba eray ama laba weedhood oo beddel isu noqon kara. Waxaa kale oo la gu ka la qoqobaa jumlado taxan oo aan ahayn hadal caadi ah sida fikrado, meerisyo maanso iwm.
16. Qoqob madhan /…/
Laba qoqob oo ay saddex dhibcood ama jiitini ku dhex jirto waxaa la gu muujiyaa hadalka socda ee xigashada ah in ay qayb ka mid ahi halkaa ka maqan tahay.
17. Guntin ’ ’
Labada hamse marmar wax ay qaataan xilka astaanta qodobka 12-aad ee xero, waxaana la gu dhex qoraa hadal xigasho ah ama si uun loo gooniyaynayo. Waxaa se kale oo la gu ka la soocaa laba xigasho oo is dhex galay (adiga oo qoraya xigasho xero ku jirta haddii ay soo dhex gasho xigasho kale oo taa hore la socota wax aad ku soocaysaa laba hamse dhexdood).
18. Hamse ’
Astaantaasi waa xaraf Farsoomaalida ka mid ah, waxaana loo dhigaa laba ujeeddo. A) in codka kulul (shedka) la gu muujiyo, tusaale ahaan: lo’da ri’da da’da iwm. Ha ahaatee erayadaasi kolka ay ku joogsadaan barta hamsadu saaran tahay astaantaa waa la ga maarmi karaa, tusaale ahaan: lo, ri, da. B) in laba shaqal oo aan is wadan la gu ka la basriyo, tusaale ahaan: go’aan, la’aan, ba’an iwm. Run ahaantiina xilal badan oo hamsadaasi gudan karto ayaanay dad badani maanta adeegsan oo jiitin ka doorbidaan, tusaale ahaan: waaya’aragnimo, mala’awaal, hud’hud, mad’hab iwm.
Astaamuhu meesha ay qoraalka ka ga dhacaan, iyo iyaga qudhoodu sida ay isu la falgalaan ee isu saameeyaan, waa in la ga bartaa buugaagta dunida ee sida hagaagsan u qoran.
Dhallinyaradeenna wax qorta qaarkood astaamaynta waa ay ku dhibban yihiin waayo dugsiga ayaan si hagaagsan loo gu soo barin. Akhris badan ayuun baa arrintan la ga ga dhergi karaa, laakiin aynnu wax yar ka sheegno.
Horta hadalka qof toos u odhanayo, ama xigashada sideedii loo soo qaadanayo, waa in la geliyaa xero sidan ah ”—.” Haddaba hadalkaasi dhawr siyood buu ku bilawdaa kuna dhammaadaa:
a) In hadalka faallo ku saabsani ka horrayso, tusaale: Axmed wax uu yidhi: ”Hargeysa ayaan ku dhashay imikana jaamacadda ka dhigtaa.” Halkan hadalkaa xeraysan iyo faallada ka horraysa waxaa ka la moostay astaanta : ee aynnu u bixinnay moos.
b) Hadalkaa xerada ku jira faallo la socotaa ka ma dambayso, waana hadal buuxa oo dhammaaday, sidaa darteed joogsigu xerada gudaha ayuu u galay. Astaantii bilawga ee ahayd : iyo in aan wixii la yidhi faallo gadaal ka raacin ayaa joogsiga gudaha geliyay.
t) Haddii aan hadalka faallo ka horrayn faallana ka dambayn loo ma baahna astaanta ah : hadalka oo xerada ku jira ayaana toos u bilaabanaya, joogsiga dhammaadkuna markaa gudaha ayuu gelayaa. ”Hargeysa ayaan ku dhashay imikana jaamacadda ka dhigtaa.”
j) Hadalka xeraysani sida uu doonaba ha ku soo bilawdee haddii ay gadaal faallo ka raacdo xerada ka dib joogsi ma aha ee waa hakad xerada debedda ka ga dhacaya, kaas oo muujinaya in ay faallada soo socotaa hadalkii xeraysnaa la socoto. ”Hargeysa ayaan ku dhashay imikana jaamacadda ka dhigtaa”, ayuu yidhi Axmed. Marmar waxaa dhacda xigashada in laba xero loo qaybiyo oo faallo la dhex geliyo, taasna sida loo astaynayaa wax ay ku xidhan tahay sida uu hadalku isu haysto ama u dhisan yahay. ”Hargeysa ayaan ku dhashay”, ayuu yidhi Axmed ”imikana jaamacadda ka dhigtaa.”
Kolka sheeko la qorayo, marka ay jilayaashu haasaawayaan (wada hadlayaan) laba siyood baa la gu muujiyaa oo ka la ah in qof walba hadalkiisa la ga horraysiiyo jiitin, ama in qof walba hadalkiisa la geliyo xero. Labada jeerba waxaa wacan in qof walba hadalkiisa sadar cusub la ga bilaabo, xitaa haddii uu yahay eray keliya. Weliba sadarka cusubi waxa uu sii wacan yahay kolka jiitinta la adeegsanayo.
Tusaalahan hoose waa labada siyood ee haasaawe loo qoro:
– Farxiyaay, horta maxaad qabataa? ayuu Axmed wayddiiyay iyada oo inta ay bariidisay kursi soo jiidanaysa.
– Walaal, Jaamacadda Hargeysa ayaan dhigtaa?
– Haa, oo maxaad ka barataa?
– Culuunta kumbiyuutarka… hana odhan ragga oo keliya ayaa barta culuunta kumbiyuutarka!
– Maya ee runtii aad baan kuu gu bogaadinayaa. Waa aqoon dalkeenna loo ga baahan yahay oo aadan shaqo ku waayi doonin.
– Mahadsanid. Waa run oo mustaqbalka dunidu waa kumbiyuutarka. Adigu maxaad qabataa?
– Jaamacadda Kharduum baan saddex sannadood culuunta beeraha ku soo qaatay, dhowaan baanan shaqo ka bilaabay mashruuc Sanaag baradhada ka beeraya, ayuu u gu jawaabay si han iyo niyadsami la ga dareemayo.
– Waan gartay. Waaba wax igu cusub baradhadu in ay dalkeenna ka bixi karto. Jeclaan lahaayee in aan maalin walba helo baradho daray ah, ayay tidhi Farxiya oo xusuusatay sida ay baradhada u jeceshahay.
– Baadhitaan iyo tijaabo badan oo la sameeyay baa la gu ogaaday Sanaag in ay baradho tayo wanaagsani ka bixi karto, ayuu u gu bushaareeyay.
Sidan kalena u fiirso:
”Farxiyaay, horta maxaad qabataa?” ayuu Axmed wayddiiyay iyada oo inta ay bariidisay kursi soo jiidanaysa.
”Walaal, Jaamacadda Hargeysa ayaan dhigtaa.”
”Haa, oo maxaad ka barataa?”
”Culuunta kumbiyuutarka… hana odhan ragga oo keliya ayaa barta culuunta kumbiyuutarka!”
”Maya, runtii aad baan kuu gu bogaadinayaa. Waa aqoon dalkeenna loo ga baahan yahay oo aadan shaqo ku waayi doonin.”
”Mahadsanid. Waa run oo mustaqbalka dunidu waa kumbiyuutarka. Adigu maxaad qabataa?”
”Jaamacadda Kharduum baan saddex sannadood culuunta beeraha ku soo qaatay, imikana wax aan shaqo ka bilaabay shirkad Sanaag baradhada ka beeraysa”, ayuu u gu jawaabay si han iyo niyadsami la ga dareemayo.
”Waan gartay. Waaba wax igu cusub baradhadu in ay dalkeenna ka bixi karto. Jeclaan lahaayee in aan maalin walba helo baradho daray ah”, ayay tidhi Farxiya oo xusuusatay sida ay baradhada u jeceshahay.
”Baadhitaan iyo tijaabo badan oo la sameeyay baa la gu ogaaday Sanaag in ay baradho weliba tayo wanaagsani ka bixi karto.”
Hargeisa:-Abwaan Yuusuf Shaacir Oo Eedo Ka Difaacay Qoraa Idaajaa Oo Hargeysa Soo Gaadhey
12/06/2018 - 16:49:07
Somaliya:-Khilaaf Ka Sharci Oo Ka Dhashay Magacaabista Gudoomiya Cusub Ee Maxkamada Sare Somalia Garyaqaan Baashe Axmed Yuusuf.
01/06/2018 - 12:42:32
Gudaha:-Boobe Yuusuf Ducaale Oo Ka Waramay Taariikhdii SNM Hargaysa Soo Gashay Iyo Waayihii Ku Gadaamnaa.
Hargeysa: Daawo Boobe Yuusuf Ducaale Oo Fashiliyay Cidda Runta Ah Ee Ka Dambaysay Dagaalka Ceel-afweyn
15/05/2018 - 00:09:08
Burco:- Wasiiradka Horumarinta Maaliyada Somaliland Oo Maanta Booqasho Ku Tagay Naadiga Akhriska Iyo Qoraalka Halkaraan Burco.
30/04/2018 - 17:39:51
Hargeisa-Aqoonyahan Maxamed Yuusuf Oo Ka Warbixiyay Xalka Lagaga Bixi Karo Sicir Bararka.
27/04/2018 - 16:27:48